नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग आवश्यक तर सरकार भने स्वीकार्दैन,डब्ल्यूएचओ भन्छ - Rara Sanchar
संवाददाता : फोटोः रोयटर्स प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७८, शनिबार १८:३४ प्रकाशित मिति : मे 15, 2021
कोभिड महामारीसँग जुझ्न नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग आवश्यक रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले बताएका छन् । शुक्रवार नियमित प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै डा. गेहब्रेयससले भारत मात्रै नभई नेपाल, भियतनाम, क्याम्बोडिया, थाइल्यान्ड र इजिप्ट जस्ता देशहरूमा पनि सङ्क्रमण र अस्पताल भर्ना ह्वात्तै बढेको बताएका हुन् ।
अफ्रिका र अमेरिका महादेशका केही देशहरूमा पनि सङ्क्रमण बढेको बताउँदै उनले यी देशहरू सङ्क्रमणसँग जुझ्न उच्च सङ्घर्षको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । डा. गेहब्रेयससले भने, “डब्ल्यूएचओले सबै तरिकाबाट सम्भव भएसम्म सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछ ।”
नेपाल सरकारका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले भने आपत्कालीन सहयोग आवश्यक रहेको भन्ने धारणा ‘डब्ल्यूएचओको मात्र भएको र नेपाल सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो नठानेको र सरकार व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामै रहेको’ बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सङ्क्रमित सङ्ख्या बढिरहेको देखेर डब्ल्यूएचओको त्यस्तो मूल्याङ्कन आएको हुनसक्ने बताए । के सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नु आपत्कालीन अवस्था देखिनका लागि एउटा आधार होइन र ? डा. गौतमले भन्छन्, “सङ्क्रमितको सङ्ख्या जसरी बढेको थियो, पाँच दिनयता स्थिर छ। शुक्रवार केही घटेको छ। एक सातामा अझ कम हुन्छ होला ।”
गौतमले यस बीचमा विशेष अवस्था भनेर डब्ल्यूएचओसँग कुनै विशेष सहायता नमागिएको बताए । उनले भने, “डब्ल्यूएचओले त्यस्तो ठानेको भने उसको औपचारिक भनाइ आएपछि सरकारले त्यस’bout आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।” बीबीसीले लेखेको छ ।
नेपालमा हालको सङ्क्रमण दर र मृत्युदर तुलनात्मक रूपमा खराब छ । गएको दुई सातामा नेपालमा एक लाख १० हजार ७६५ जनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तो सो अवधिमा १,३७१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ ।
तर स्वास्थ्य प्रवक्ताले आपत्कालीन अवस्थाको रूपमा कुनै विशेष सहयोग नलिईकन डब्ल्यूएचओबाट घटना पहिचान र त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न नेपाल कार्यालयबाट सामान्य सहयोगहरू मात्र लिइरहेको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, “नेपालको जोड सरसहयोग लिन परे भारत र चीनसँगै पहिले पहल गर्ने छ । त्यहाँबाट आपूर्तिहरू पनि सहज रूपमा गर्न सकिन्छ ।”
“नेपालमा सङ्क्रमण सुरु भएयता कुल सङ्क्रमितको २५ प्रतिशत गत दुई सातामा थपिएका हुन् भने कुल मृत्युको २९ प्रतिशत मृत्यु गएको दुई सातामा भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । शुक्रवारसम्म नेपालका काठमाण्डूमा ३०,४५२ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने अन्य दुई जिल्ला रुपन्देही र ललितपुरमा सात हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् । थप चार जिल्लामा ३५ सयभन्दा बढी, थप पाँच जिल्लामा दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् ।
कुल १९ जिल्लमा १,००० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने थप १५ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । ‘शय्याको अभाव पहिले जस्तो छैन’ नेपालमा बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन अभाव उच्च रूपमा बढेको र अस्पतालमा शय्या र चिकित्सकहरू अभाव रहेका विवरण आएका छन् ।
शुक्रवार बीबीसीको साँझपखमा बोल्ने क्रममा प्रवक्ता गौतमले’ सङ्क्रमित हुने र अस्पतालबाट छुट्नेको अवस्था नजिक–नजिक आइपुग्ने अवस्थामा’ व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका थिए । उनले सरकारी अस्पतालहरू सबै अब कोभिड अस्पताल बनेकाले ’अब शय्या थपिइरहेकोले तीन चार दिन अघिजस्तो समस्या नरहेको’ बताएका थिए ।
तर निको हुनेको दर केही बढे तापनि शुक्रवार मात्र ८५२० सङ्क्रमित थपिँदा ६१३५ निको भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
भारतमा शुक्रवार तीन लाख ४३ हजार जनामा सङ्क्रमण र ४,००० जनाको मृत्यु पुष्टि गरिएको थियो । नेपालमा भने ८,५२० जनामा सङ्क्रमण र २०३ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको थियो । सङ्ख्यात्मक हिसाबले भिन्नता देखिए पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा दुई देशको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको स्थिति चिन्ताजनक देखिन्छ । बिहीवारसम्मको अवस्थामा नेपालमा प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा ३१ जनामा सङ्क्रमण भएको देखिन्छ भने भारतमा सो सङ्ख्या २६ छ ।
भारतमा गत सातादेखि यो सङ्ख्या कम हुन थालेको छ भने नेपालमा अझै बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । एक जनाबाट कति जनाको सङ्क्रमण सरिरहेछ भने देखाउने आर सङ्ख्या हेर्दा पनि नेपालको अवस्था खराब देखिन्छ । भारतमा हाल सो सङ्ख्या १.१ रहेको छ भने नेपालको १.४६ रहेको छ ।
नेपालमा यो दर एप्रिल १० मा विश्वकै उच्च २.१ रहेकोमा बिस्तारै घट्न थालेको हो । मृत्युदर हेर्दा पनि भारतमा प्रति १० लाखमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने नेपालमा सो दर ४.६ रहेको छ । परीक्षण र सङ्क्रमण पुष्टिको औसत नेपालमा ४६.७ प्रतिशत रहेको छ भने भारतमा २०.२ प्रतिशत रहेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
(यो सामाग्री बिबिसीबाट साभार गरिएको हो ।)
नेपाल एयरलाइन्सको विमान सिलिण्डर लिन ओमान उड्यो
१४ पुस २०७६, सोमबार १८:५०
माओवादी केन्द्र छायाँनाथ रारा नगरपालिका समितिको बैठक सुरु, सबै वडाका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने
५ बैशाख २०७९, सोमबार १५:१७